Ụbọchị My Pet » Online dịwara Kparịtara isiokwu 100% Ịga nke Ọma
emelitere ikpeazụ: Ka. 20 2020 | 2 min agụ
The afọ iri gara aga hụrụ ọtụtụ ndị ikom na ndị inyom na irrespective ọgbọ ha mbịne online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Dị ka a nnyocha na July, 2014, mba ugbu a, nwere 41,250,000 ndị gbalịrị online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na ụfọdụ ná ndụ ha.
Ịtụle ugbu a bi na United States bụ 361.1 nde, ọ ga-kwuru na echiche nke online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị jisiri woo karịa 11% ndị mmadụ na mba. Ya mere, ihe na-eme ndị a 11% ndị mmadụ na-ekwu banyere mgbe ha izute ha nwere nwunye online?
The mkparịta ụka n'ezie amalite ukwuu tupu ndị mmadụ izute onye ọ bụla ọzọ na-online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị. Dịkwuo gị inweta nri onye, ị ga-enwe a zuru okè profaịlụ, a profaịlụ na-ekwu okwu maka onwe gị. Ọ ga-ebu a na-egbu aha, gị mma foto na ụfọdụ ozi na ị chọrọ ka ndị mmadụ mara tupu n'ezie egosi mmasị na-akparịta ụka gị na. Ọ bụrụ na ị nwere a zuru okè profaịlụ, gị Ohere izute a zuru okè onye online ga-abụ nnọọ elu.
Ugbu a na ị nwetara admirers ịgwa ajụjụ bụ ihe kacha mma isiokwu na-akparịta ụka na ndị. Ebe a na-a aro ole na ole na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị mkparịta ụka isiokwu.
Dị ole na ole na-adịghị amasị otito. Ya mere, i nwere ike na-amalite mkparịta ụka site complimenting onye nke ọzọ. The ezigbo ụzọ bụ na-amalite site n'ito nhọrọ ndị mere site ya / ya. Dị ka ọmụmaatụ, i nwere ike na-eto onye oke nke nri, uto nke music, wdg. Nke a ga-eme ka gị nwere onye na-aghọta na ị na-etinye na a otutu mgbalị na-agụ site ya / ya profaịlụ.
Ịgụ online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị profaịlụ nke onye ga-eme ka unu mara banyere isiokwu ọ / ọ bụ mmasị na. Site ha, bulie-achị na-emekwa mmasị gị na dị ka mkparịta ụka na-aga n'ihu, na-amalite na-ekwu okwu na ha. Nke a ga-eme ka chat ọzọ na-adọrọ mmasị ma na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-abụghị ndị mmasị ọ bụla na a akpan akpan onye, ọ / ọ bụ eleghị anya ọ bụghị ezi onye na ka ụbọchị.
Ndụ dị ka a dum
Ka ị na-enwe mmetụta ala akparị ụka na onye, i nwere ike na-amalite na-ekwu banyere banyere ndụ. E nwere ike ịbụ mkparịta ụka na ihe i mere ná ndụ, gị ebumnobi ná ndụ, ụdị nwata i nwere, were gabazie. Nwayọọ nwayọọ dị ka onye nke ọzọ na-amalite na-aza site n'ikere òkè akụkọ nke ya / ndụ ya, ị ga-achọta chat adịwanye akpali. Kwesịrị, ị kwesịrị ị na-amalite na-ekwu banyere gara aga mmekọrịta n'oge mbụ ikori na ị nwere; isiokwu ndị dị ga-atụle otu ugboro abụọ ị na-amalite ịghọta onye ọ bụla ọzọ nke ọma.
Ihe ka ọtụtụ n'ime online daters n'anya nzute ndị nwere ike ime ka ha na-achị ọchị; a na-anọchi ezi irrespective nke okike ha na iso. Ya mere, na-ekere òkè a ole na ole witty onye-iche iche na njakịrị bụ oké ụzọ na-eme ka mkparịta ụka ọzọ na-adọrọ mmasị. Mgbe na-agbalị ka cheesy gị ọchị, na-zere-eme ihe ọchị na onye ị na-akparịta ụka.
Online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị mkparịta ụka isiokwu agbasaghị iche iche dabere uto, gụruru akwụkwọ na afọ nke ndị mmadụ. Ya mere, mgbe ị na-ahọrọ a isiokwu nke mkparịta ụka n'oge online ụbọchị ị ga na-ihe ndị a n'uche.
Olee otú Iji Nwee Otu Ịtụnanya mbụ Ụbọchị